I-Brown Spluse Spider, Okufuneka Uyazi
Izilwanyana kunye Nendalo Izigulane
I-Brown Spluse Spider
Iimpawu kunye neempawu zeBrown ezihlaziyiweyo
Isiqulatho sokumnyama esibomvu, iLoxosceles reclusa , inegama elibi nelininzi elingasifanelanga. Kuyo yonke i-US, abantu bayesaba ukulunywa kwalesi sigcawu, bekholelwa ukuba ngumhlaseli okhuselekileyo kwaye ezithile zibangele amanxeba anomonakalo. Uphando olwenziwe ngamagqabi okuhlambalaza aluhlaza luye lwafakazela ukuba oku kuthethwa ngamanga.
Isici esaziwa kakhulu se-spider spruce-back is a fingle-shaped marking on cephalothorax.
Intamo yomnyama obomvu umgca kwi-esiswini. Ngaphandle kwalolu phawu, ukugqithisa okumdaka kunombala obomvu ngokungafaniyo, kungabikho micu, amabala okanye amanqaku ombala ochaseneyo. Ukumakishwa kwe-violin akukho uphawu oluchongileyo. I-Young L. i-recluses ingabikho mqondiso, kwaye ezinye iindidi zeLoxosceles nazo zibonisa iinkcukacha ze-fiddleback.
Ngaphandle kwezinye iintlobo zeLoxosceles , i-brown recluses inamehlo ayisithandathu, ehlelwe kwipateni yesigqa sesibini. Lo mbandela uhlukanisa izigulane zeLoxosceles kwizinto ezininzi, ezisoloko zinamehlo asibhozo. Ukugqithisa okumnyama kunako naziphi na izipho ezinzima emzimbeni kodwa zihlanganiswe ngeenwele ezilungileyo.
Indlela kuphela ecacileyo yokuchonga isikhombululo sokumnyama , i- Loxosceles reclusa , kukuhlola i-genitalia. Ngomlinganiselo womzimba wangekota engama-intshi ubude, oku kufuna i-microscope ephakamileyo. Izigulane ezinqamlekileyo zokuhlambalaza kufuneka zifakwe kwi-agent yakho yokwandisa i-county ukuchongwa kweengcali.
Isihlunu esiluhlaza esibomvu sondla ebusuku, sishiya ukhuseleko lwewebhu lwayo ukufuna ukutya. Uphando lwangoku lubonisa ukuba ukuhamba okumnyama kubaluleke kakhulu kumkhwayizi, ukondla kwiinambuzane ezifile. Ingqungquthela iya kubulala ixhoba eliphilayo xa lifuneka.
UBrown uhlalisa izigulane zihlala malunga neminyaka emibini.
Inkazana ibeka amaqanda ama-50 ngelo xesha, idibanise kwi-sacken silken. Uninzi lwamaqanda luvela phakathi koMeyi noJulayi, kwaye enye ibhinqa inokubeka amahlanu kathathu ngonyaka. Xa i-spiderling iyaphuka, ihlala kunye nomama kwiwebhsayithi yayo baze baqule amaxesha ambalwa. Ngaphezulu komnyaka wokuqala wobomi, i-spiderlings iya ku-molt ukuya kumaxesha asixhenxe ngaphambi kokuba ngumdala.
UBrown uhlahlela izigulane usebenzisa iifayini ezimfutshane zokufaka injeni ye-cytotoxic. Xa ucatshukiswa, isikhalabhaka esilula esibomvu siyakuma, kwaye le ngqungquthela ingabangela amanxeba enxantathu kumntu okanye kwisilwanyana esilwe.
I-Venom ayilona khuselo lokubaluleka oluphambili, kodwa ke. Njengoko igama liye lisikisela, le ngqungquthela inamahloni kwaye idlulise iiyure zomini ekuphumeni, ngokuqhelekileyo kwiwebhu. Xa uhlala ungasebenzi ngexesha lomhla, ukuhamba okumnyama kukunciphisa ukutyhila kwawo kwizinto ezisongelayo.
I-Brown i-recluses ikhetha indawo emnyama, engaphazamiseki. Emazini, izigubungulu zifumana indawo yokukhusela kwindawo yokuhlala, izitoreji zokugcina, iigaraji kunye neentsimbi. Ebudeni bemini, banokufihla kwiibhokisi zekhadibhodi, iimpahla eziboxiweyo okanye izicathulo. Ngaphandle, izigubungqungquthela ezigqithisileyo zifumaneka ngaphantsi kweengodo, kwiintlanga kunye neengcingo zeemithi, okanye ngaphantsi kwamadwala.
Uhlobo olusisiseko lwe-spider le-spider lugxininisekile kwi-US lusezantsi eMidwest, ngasezantsi ukuya kwiGulf of Mexico. Iintlanganiso eziqhelekileyo kunye neentlupheko ezinqamlekileyo kwiindawo ezingaphandle kwale ndlela zibhekiselele kumashishini angaphandle. UMnumzane uBrown uhlahlela izibhendi unokufuna indawo yokukhusela kwiibhokisi zekhadibhodi, kwaye enze indlela eya kwiindawo ezingekho ngaphandle kwazo ezaziwa ngokuthunyelwa kwempahla.
Iimpawu eziqhayisayo malunga nabaMnyama abaMnyama
I-Spiners Jumping, i-Family Salticidae
IiFrentshi kunye namaFrentshana
I-50 Best J. Cole Iingoma
INtloko kaRhulumente eCanada
Imfazwe kaKesari: iMfazwe kaFaro
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yaseStoney Creek
5 Izigulane Eziya